Rem Bk – Page5– BIG FM 101.2 MHz
Home » Rem Bk (page 5)
बाराही मन्दिरका पुजारीलाई लाइफ ज्याकेट
बिग खबर पोखरा, ४ बैशाख । पोखराको लेकसाइड डोजाङ्गले फेवाताल विचमा रहेको तालबाराही मन्दिरका पुजारीहरुलाई लाइफ ज्याकेट सहयोग प्रदान गरेको छ । मंगलबार विहान एक समारोहका विच डोजाङ्ग प्रमुख प्रितम कुँवरले मन्दिरका पुजारी नारायण प्रसाद अधिकारीलाई पाँच थान लाइफ ज्याकेट हस्तान्तरण गरे । त्यसैगरि कुँवरले मन्दिरका लागि १ हजार भेटि सहयोग प्रदान गरे । पुजारी अधिकारीले लाइफ ज्याकेट सहयोग गरेकोमा …
किन भए यी कलाकारहरु हैरान ? (भिडियोसहित)
बिग खबर पोखरा, ४ बैशाख । जब हत्तु परेर हैरान हुन्छ । मान्छेको भावभंगी कस्तो हुन्छ ? फिल्म हैरानको टाइटल गीतको भिडियोमा यो कुरालाई देखाउन खोजिएको छ । सत्यराज आचार्य र स्वरुपराज आचार्यको शब्द तथा संगीतमा तयार भएको गीतमा सत्य स्वरुपसँगै सरगम आचार्य र बबिता मानन्धरले स्वर दिएका छन् । सार्वजनिक गीतको भिडियोमा सरोज खनाल, सत्यराज आचार्य, निर्मल शर्मा, गजित …
रेम बिक पोखरा, ४ बैशाख । विविध प्रकारका चरित्र निभाउनमा अभिनेत्री ऋचा शर्मा माहिर छन् । ‘उमा’मा जनमुक्ति सेनाको रुपमा होस् या ‘टलकजंग भर्सेज टुल्के’मा साहुमहाजनको घरमा बसेर काम गर्ने ‘फुली’को रुपमा, उनी आफुलाई हरेक चरित्रमा अब्बल देखाउन सक्ने खुबी राख्छिन् । हरेक फिल्ममा फरक चरित्रमा देखिन रुचाउने ऋचालाई आफैले गरेका चरित्रहरुमध्ये सबैभन्दा मन परेको चरित्र भने ‘को आफ्नो’ चलचित्रको …
इक्यान चुनाव सरगर्मीः आफ्नै प्रतिस्पर्धीका लागि भोट मागे भण्डारीले
बिग खबर पोखरा, २७ चैत । इक्यान केन्द्रको अघिल्लो चुनावमा प्रतिस्पर्धी भएर चुनावमा होमिएका सन्तोष प्याकुरेल र महेश भण्डारीबीच यो पटक गज्जबको मेलमिलाप देखिएको छ । इक्यान कास्कीका पुर्वअध्यक्ष समेत रहेका महेश भण्डारीले यो पटक भने अघिल्लो चुनावमा आफ्नै प्रतिस्पर्धी रहेका प्याकुरेलको पक्षमा भोट माग्दै हिँडेका छन् । केन्द्रीय महासचिव पदका लागि अघिल्लो चुनावमा यी दुईजना आपसमा प्रतिस्पर्धी थिए । …
‘सिन्डिकेट’ लाद्न नपाएपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने
बिग खबर काठमाण्डौ, २६ चैत । यातायात क्षेत्रमा एकछत्र सिन्डिकेट लाद्न नपाएपछि व्यवसायीहरु सरकारको विरुद्धमा आन्दोलित हुने भएका छन् । सिन्डिकेट तोड्न सरकारले रुट इजाजत खुला गरेपछि आक्रोसित यातायात व्यवसायीहरुले भेला गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनबाटै सरकारलाई घुँडा टेकाउने दाबी गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले १८ चैतमा यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेर देशभरका सडकमा रुट …
यस्तो छ प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब सुविधा
बिग खबर पोखरा, २६ चैत । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि अबदेखि प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्रीको तलब प्रतिमहिना ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायकमन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको छ । सोमबार बसेको संसद बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको तलब सुविधासम्बन्धि विधेयक पारित गरेको हो …
बिग खबर काठमाण्डौ, २६ चैत । अवैध हतियारसहित गौशालामा समातिएका गुण्डा नाइके गणेश लामालाई प्रशासनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि डिल्ली बजार कारागार चलान गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले बताएका छन् । ३० फागुनमा गौशालास्थित होटल पशुपति भिजनमा गोली चलेलगत्तै घटनास्थल पुगेको महानगरीय प्रहरी वृत, गौशालाको …
बैंकर प्रेमीकासँग मिलेर ५ करोड ठगेपछि सेनाका सहायक रथी जेल चलान
बिग खबर काठमाण्डौ, २६ चैत । बैंकमा कार्यरत प्रेमीकासंग मिलेर ५ करोड ठगी गरेको कसुरमा नेपाली सेनाका सहायक रथी डा. रमेश विष्ट जेल चलान भएका छन् । पाटन उच्च अदालतले विष्टलाई बैंकिंग कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जेल चलान गर्ने निर्णय सुनाएको हो । कृषी विकाश बै‌ंकमा कर्मचारी दीपिका रेग्मीले गरेको ठगीमा सहायक रथी विष्टको पनि संलग्नता देखिएको थियो। सहायक टेलरका …
आगो निभाउन रित्तो दमकल
जमुना वर्षा शर्मा पोखरा- पोखरामा बिजुलीमा पोलमा लागेको आगो निभाउन रित्तो दमकल पुगेपछि स्थानीय अचम्ममा परेका छन्। बिरौटा चोकको रहेको बिजुलीको पोलमा आगलागी भएपछि स्थानीयले बिजुली अफिस र दमकललाई फोन गरेका थिए। दमकल केही बेरमा घटना स्थलमा पुगे पनि जब आगो निभाउन थालियो, तीनचार बाल्टीपछि पानी नै सकियो। दमकलमा पानी नभएको देखेपछि स्थानीय अचम्ममा परे। थप क्षति हुने हो कि …